Gantaalkii Shiinaha ee fakaday oo saacadaha soo socda dhulka soo gaaraya | Xaysimo
Home War Gantaalkii Shiinaha ee fakaday oo saacadaha soo socda dhulka soo gaaraya
Qeybo ka mid ah haraadiga gantaalkii uu Shinaha hawada sare u diray ayaa waxaa lagu wadaa in uu dhulka ku soo dhaco saacadaha soo socda, sida ay sheegen khubarada ku raadjooga.
Haraadiga gantaalkan oo la ganay toddobaadkii aanu soo dhaafnay ayaa lagu wadaa in uu dhulka ku soo dhaco maanta galinka dambe ama subaxa Axadda, sida ay sheegtay xarunta hawada sare ee cilmi-baarida iyo hormarinta ee Mareykanka .
Wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa jimcihii sheegtay in inta badan haraadiga gantaalkan uu guban doono islamarkana ay aad u yartahay suurtagalnimada in uu waxyeelo geysto marka uu soo dhaco.
Mareykanka ayaa dhankooda sheegay in ay ku daba jiraan gantaalkani ay Shiinaha hawada sare u direen .
Laanta hawada saree ee Mareykanka ayaa “saadaashoodii ugu dambeysay” waxay sheegeen in laga yaabo in haraadiga gantaalkan u ku soo dhaco jasiiradda waqooyiga ee dalka New Zealand,.
Balse waxay sidoo kale sheegeen in ay suuragal tahay in uu ku dhaco meelo kale oo aan New Zealand ahayn.
Balse, gantaalka oo ku soo wajahan dhulka, hadda wuu goostay xakamaha. Waa gantaalkii labaad ee ugu wayn ee la xakameyn waayay ee dhulka ku soo dhaca, 30 sano gudahood.
Isaga oo ka hadlaya magaalada Beijing, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibedda Wang Wenbin waxa uu sheegay in Shiinuhu uu si dhow ula socdo gantaalka oo intiisa badanna ay guban doono marka dib uu dhulka soo gaaro.
“Suurtagalnimada in gantaalka uu waxyeello ka geysto dhulka aad ayay u hooseeyaa,” ayuu yidhi.